Percona TokuDB: Yakakwira Performance uye Akakwira Mavhoriyamu muMySQL / MariaDB yeLinux | Kubva kuLinux
Percona TokuDB: Yakakwira Performance uye Akakwira Mavhoriyamu muMySQL / MariaDB yeLinux
linuxero | | Kuronga
Pakati pezvakakurumbira uye inozivikanwa dhatabhesi ndeye MySQL, pamwe neyakavhurika Source shamwari MariaDB. Nhasi vanoonekwa seyakajairika mukuvandudza kwewebhu webhu uye isu tinogona kuzvizadzisa sechikamu chevanozivikanwa LAMP Stack (Linux - Apache - MySQL / MariaDB - PHP / Python / Perl).
Kutenda kune iyo MySQL uye MariaDB plug-in system, dzimwe injini dzekuchengetedza dzakagadzirwa kuti dziwedzere nekuvandudza mashandiro avo, nhasi tinokupa Percona TokuDB, injini yekuchengetera yakagadzirirwa kubata mavhoriyamu makuru eruzivo nenzira yakajeka uye nyore.
Percona TokuDB Inogona kuwedzerwa kune chero MySQL kana MariaDB semuenzaniso kubvira vhezheni 5.1 pasina muripo, chete paLinux inoshanda sisitimu, sezvo ichitora mukana wepasi-zviwanikwa zviwanikwa senge memory paging. Inopa kutenderera makumi maviri nguva zvirinani mhinduro nguva uchienzaniswa ne InnoDB Pasina kugadzira chero mhando yekushandurwa, kuwedzera kune yakanakisa ruzivo rwekuomesa michina iyo inobvumidza iwe kudzikisa mashandiro emari uye nekudaro kuita kuti scalability yeako dhata yekuchengetedza masystem.
Chinhu chikuru ndechayo Fractal Muti Indexing, imwe yakanatswa vhezheni ye indexing B-Muti iyo inokwenenzvera kuchengetedza mabhenefiti ayo nekudzora zvakanyanya zvayakaipira, ichibvumira kukurumidza indexing ine yakaderera mhedzisiro pane dhatabhesi dhisiki saizi. Pamusoro pezvo, tinogona kusimbisa:
Kusvikira 25x Inovandudza Dhata Kumanikidza
Inoderedza kunonoka pamaseva evaranda nekuda kwayo Verenga Yemahara Kudzokorora
Hot Scheme Shanduko
Hot Index Kusika - Iyo TokuDB ivo vanotsigira kuisa, kudzima uye kubvunza pavanogadzira indekisi patafura.
Kupisa kuwedzera, kubviswa kana kuchinjiswa kwemakoramu.
Online Backup, pasina kumisa dhatabhesi
Isu tinoziva kuti MySQL yakaverengerwa seiyo 2nd inonyanya kuzivikanwa dhatabhesiNepo MariaDB kunyangwe ari mudiki (Kukadzi 2008) ari muTop 25. Aya mvumo inokonzerwa nekuchinjika kwayo uye nyore kushandisa. Asi ikozvino, nekuda kweTokuDB, ivo vanogona kushandiswa zvakavimbika kune matsva maficha ane chekuita neBig Data uye kuongororwa kwemahombe makuru mavhoriyamu.
Saka isu tinokurudzira iwe kuti uedze Percona TokuDB uye unakirwe nekuvandudzwa munguva dzekupindura usinga gadzirise zvimwe, kuchengetedza kuenderana nemaapplication ako pasina kunetsekana.
Tinotenda vatambi venharaunda yePercona naTokutek (vagadziri veTokuDB) nerubatsiro urwu rukuru kune Yemahara Software nharaunda!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kuronga » Percona TokuDB: Yakakwira Performance uye Akakwira Mavhoriyamu muMySQL / MariaDB yeLinux
Zano rakanaka. Chidzidzo hachina kunyanya kuipa.
Ini ndinofunga zvakafanana! Zvinogona kuve zvinonakidza kuwedzera mashandiro eblog redu kana webhusaiti.